Azonao lazaina ahy ve ny fomba ahazoana ny backlinks EDU?
Efa teo amin'ny indostria fanentanana momba ny Search Engine aho efa ho dimy taona izao. Ary azoko tsara ny maha-zava-dehibe ny fahatakarana tsara ny fomba hahazoana ny backlinks EDU. Izany no mahatonga ahy amin'ity teboka ity, dia hampiseho anareo tetika maimboalaza aho mba hanome fandrosoana goavana ho an'ny tranokalanao na blôginao. Ity paikady ity dia mitazona amin'ny ankapobeny ny vatsim-pianarana, ary ny marina dia hamela ny olon-drehetra hahazo izany raki-pampianarana mazava tsara izany nefa tsy mandoa hetra, farafaharatsiny farafaharatsiny. Noho izany, etsy ambany dia hasehoko anao ny fomba hahazoana rindran-damina EDU miaraka amin'ny torolalana tsotsotra nataoko tato ho ato mba hitsapana ny raki-tsorako manokana 15 amin'ireo tranonkala fanabeazana mandritra ny roa na telo volana eo ho eo. Eny, lasa asa mandany fotoana fotsiny izany, nefa hiankin-doha foana izany.
Ahoana no handraisana ny efitrano EDU - Torohevitra mahasoa
Tier 1: Mifidy ny tanjona tsara
Alohan'ny hanombohantsika, Ny fisafidianana ny mpihaino votoatin-dresaka sy ny filàn'izy ireo manan-danja dia mitovy ihany koa tsy ho an'ny backlinks voajanahary fotsiny, fa amin'ny fahatakarana marina momba ny fomba hahazoana rindran-damina EDU ary manomboka mandeha amin'ny làlana marina hatrany am-piandohana. Ny tiako holazaina na dia amin'ny endrika azo tsapain-tànana amin'ny fananganana rohy fanabeazana aza dia mbola mila mahafantatra ny mpihaino anao ianao, izay tokony hifanaraka amin'ny lohahevitry ny tranonkala na ny blôginao.Ny fampidirana azy amin'ny teny anglisy, ny zavatra rehetra ilainao hanombohana, dia mamantatra ny mpanatrika ny mpianatra. Raha toa ianao ka manangona backlinks fanabeazana sarobidy, dia ataovy azo antoka fa tena liana amin'ny programa momba ny vatsim-pianarana ho avy ianao.
Tier 2: Fanorenana pejy fanabeazana
Ankoatra izany, tokony hiasa amin'ny pejin'ny stolar. Na dia asa tsotra aza ny mamorona ity karazana votoaty ity, dia misy soso-kevitra bala sasantsasany ho anao manokana. Ataovy azo antoka fa manana ny zava-drehetra ho an'ny manaraka ianao:
Famariparitana momba ny orinasa - ataovy fohy nefa mbola feno tanteraka, zavatra toy ny "vatsim-pianarana anatiny. "Ampifandraiso amin'ny Internet ianao avy eo, ary koa ireo fizarana manan-danja hafa handalinana ny sira fifandraisana.
Fepetra - Azonao atao ny mamolavola ny zavatra rehetra araka izay azo atao amin'ny mpianatra tianao. Ataovy azo antoka ny handinihina raha manana fandaharam-potoana feno na ampaham-potoana izy ireo, ireo fepetra manokana mifandraika amin'ny foto-kevitrao fototra, izay firenena (tanàna na faritra) mety ho azo avy amin'ny, sns.
Ny sandan'ny habetsahana - Mazava ho azy fa miankina amin'ny tetibolanao amin'ny fananganana rohy ny habetsaky ny vatsim-pianarana. Fa raha ny amiko kosa, dia mampirisika azy hametraka izany eo amin'ny dolara arivo dolara. Raha tsy izany, dia mety tsy ho afaka hanintona ireo toeram-pampianarana mahasoa sy ny bolongany.
Ny antsipiriany momba ny fampiharana - izay ilainao eto dia ny manamboatra sehatra mazava sy mora azo. Ho an'ny fampiharana fototra tianao hampiasain'ireo kandidà tsirairay ny handefa ny programa momba ny vatsim-pianarana. Amin'izany, dia ataovy izay hamaritana ny daty sy ny daty valisoa.
Taille 3: Ny fahafaha-manatsara ny toetrandro
Raha ny hevitro manokana, fananganana rohy fanabeazana nampiasaiko ny Excel. Amin'izany fomba izany, azoko atao ny manara-maso ny fanaraha-maso marina ny asako rehetra amin'ny alàlan'ny pejin'ny lisansa, ny fifandraisana misy eo amin'ny fifandraisana, ny anarana, ny adiresy mailaka, ny domains, ny fanamarihana, sns.Ho mora kokoa amin'izay izany!
Toro 4: Fanarahana ny Outreach
Farany, mba hahazoana fahatakarana feno amin'ny fomba hahazoana ny rindran-damina EDU, dia tsy maintsy hamita ny fitoriana ianao. Ary eto dia tsy maintsy mamorona asa ianao ary miezaka mafy mba hahitanao ny olona mifanerasera amin'ny farany. Tadidio fa ny anjerimanontolo sy ny oniversite rehetra dia nahazo ny tompon'andraikitra tompon'andraikitra tompon'andraikitra amin'ny adiresy. Noho izany, ny zavatra rehetra ilainao dia ny mametraka template mailaka matanjaka ary mandefa ny toerana ho an'ireo izay manantena valiny tsara. Raha vantany vao vita izany, dia tsy maintsy mandefa ny antsipiriany momba ny programa momba ny vatsim-pianarana ianao, na mameno ny mari-pamantarana manokana nomen'ny sampam-pampianarana Source .